Tsy miverina fa maka faka! | NewsMada
Tsy miverina fa maka faka!
Somary mampangidihidy ireo zatra miresaka « fandrosoana sy fanatontoloana » ny fahahenoana ny teny hoe « miverina ». Manahy mafy mantsy izy ireny sao manao salaka indray, hono, ny Malagasy kanefa efa nilaozan’ny toetrandro izany. Ahiahy tsy mitombina satria io fiheveran-dry zareo ny atao hoe « miverina » io mihitsy no diso na fanahy iniana disoina. Tahaka izany ihany koa ny fiheveran-diso ny amin’ny « fandrosoana »… Tafaray samy diso sy anaovana dika vilana avokoa na ny fandraisana ny « miverina » na ny fahafantarana ny « fandrosoana » hany ka tonga ho azy ny tahotra sao hisalaka sy hitafy lamba indray. Tahotra ny hampiasa tany ravo sy ny volafotsy ary ny fanazavana ho fidiovana satria finoanoam-poana, hono, izany.
… Miteraka fifampisintonana ho any atsimo sy ho any avaratra ny tranga toa io satria samy tsy hay na ilay heverina ho fandrosoana na ny lazaina ho fiverenana amin’ny fototra. Anisan’ny antony iray mampitsingevana ny firenena « adalam-pandrosoana sy ireo an-dalam-pandrosoana » ny fisian’ireo tambatra tsy fahaizana ireo.
… Mila tezaina hahalala ny fototra maha izy azy ny Malagasy tsirairay mba tsy hihinana amam-bolony. Mba hiala tao aminy ilay ahiahy tsy marim-pototra. Mba ho sahy haneho sy hiaina amin’ny maha izy azy izy fa tsy ho tai-dronono mandroatra sy hitafy lamba eo imason’ny tompony. Tsy ho mpindrana lava, sns!
Mila ahitsy ny fanabeazana ny maha olona eto Madagasikara. Anisan’ireny ny any amin’ny fampianarana, eo anivon’ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny fifandraisana amin’ireo vahiny avy any ivelany. Raha tsara faka amin’ny maha Malagasy ny Malagasy ireo, ho zary loharanom-pandrosoana goavana ho an’i Madagasikara.
Mila olona « mahalala » anefa vao afaka manao izany. Tsy afa-mitsoaka adidy amin’izany ny raiamandreny isan-tsokajiny. Mila manatanteraka ny andraikiny izy ireny mba tsy hanan-tsiny amin’ity tanindrazana iombonana ity sy ny taranany!